प्रकृतिको न्यायमाथि विकृतिको अन्याय - Pradesh Today प्रकृतिको न्यायमाथि विकृतिको अन्याय - Pradesh Today
पुष २४, २०७६ प्रदेश टुडे
प्रकृति सबैका लागि समान छ । विश्व ब्रह्माण्ड ओगेटको खगोल मण्डल, वायुमण्डल, जलमण्डल र स्थलमण्डल कसैका लागि कमी र कसैका लागि बढी छैन । अर्थात् आकासले सबैलाई दिनुपर्ने छानो समान रुपमा दिइरहेको छ ।
वायु तथा हावाले दिनुपर्ने स्वाश तथा प्रश्वास समानरुपमा दिइरहेको छ । जलले दिनुपर्ने स्वाद सबैका लागि समान तरिकाले दिइरहेको छ । यो धर्ती अर्थात् पृथ्वीले दिनुपर्ने काख सबैका लागि समान तरिकाले दिइरहेको छ ।
सूर्यले दिनुपर्ने राप, ताप र उर्जा सबैलाई समानरुपले प्रवाह गरिरहेको छ । चन्द्रमाले दिनुपर्ने शीतलता र कोमलता सबैका लागि समानरुपले प्रकट भइरहेको छ । यो सिंगो प्रकृतिको नियम, विधि, कानुन, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त नै समान छ । यसले कुनै जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, सम्प्रदाय हेरेर अलग, भिन्न, फरक र पृथक बन्न सक्दैन ।
राजदेखि रङ्कसम्म, देवतादेखि डङ्कसम्म र भुसनादेखि हात्तीसम्म सबैका लागि उत्तिकै जिम्मेवारी र जवाफदेही छ, यो प्रकृति । प्रकृति आजसम्म कसैको पोल्टामा र कसैको कोल्टामा परेको इतिहास र प्रमाण छैन ।
जसरी यो प्रकृतिले सारा चराचर जगत्लाई नै समान न्याय वितरण ग¥यो त्यस्तै किसिमले यो मानव निर्मित कृत्रिम विकृतिले पनि आफ्नो पाइलो त्यसरी नै चलाएको भए कति सुन्दर, शान्त र विशाल पृथ्वी हुने थियो होला । आखिर हामी सबैलाई प्रकृतिले सिकाएको र देखाएको सत्य, तथ्य कुरा त समान हुनको लागि हो नि ?
तर पनि किन यो दिनप्रतिदिन असमान बन्दैछ ? प्राकृतिक न्यायमाथि किन कृत्रिम न्यायले हमला गर्दैछ ? प्रकृतिको पाठ मानव समुदायले किन पढ्न सकेन ? प्रकृतिको शिक्षा मानव शक्तिले किन ग्रहण गर्न सकेन ? प्रकृतिको न्यायीक भूमिकालाई मानवजनले किन व्यवहारमा उतार्न सकेन ?
प्रकृतिको विशाल छातीमाथि जन्मिएर, हुर्किएर, खेलेर, खाएर, नाचेर, बाँचेर पनि त्यही प्रकृतिको विधि र विधानलाई मानवले किन पालना गर्न सकेन ? आज जति पनि जीव प्राणी प्रताडित छन् ती सबै मानवरुपी कर्म र कृत्रिमरुपी विकृतिले व्याप्त छन् । सबैलाई आफ्नो जीवन चोलाको रहस्य र यथार्थ थाहा छ र जानकारी छ । मानव आफूले रचेका र बनाएका कुरालाई विकासमात्र भन्न जानेको छ तर त्यसलाई विनास भन्न कहिल्यै जानेको छैन ।
आज मानिसले देखेका, जानेका, सुनेका, भोगेका सारा सम्पूर्ण कुराहरुलाई विज्ञान र प्रविधिको नाम जोडेर वा विकास र परिमार्जनको संज्ञा दिएर जे–जे गरे ता पनि र जे–जे भनेता पनि ती सबै र यावत कुराहरु हर मानवसम्म पनि यो सबै विकासको अग्रगति भन्न छोडेका छैनन् ।
आज देश र जनता जति पनि भय, डर, त्रास, आतङ्क र वितण्डतामा छन् ती सबै विकृतिका कारणले छन् । प्रकृतिले एकपटक अप्रत्यासित अन्याय ग¥यो भने मानवले वर्षौ–वर्ष त्यसैको असर व्यक्त गर्दछ र देशको कालखण्डको इतिहासमा टिपेर, लेखेर, जोखेर, तौलेर र नापेर राख्दछ तर मानरुपी विकृतिले पु¥याएको क्षति तथा असरको कहिल्यै पनि लेखाजोखा हुँदैन ।
आज पछिल्लो समयमा देशमा विकृति यति व्याप्त छ, जो भनेर, गनेर, सुनेर र लेखेर साध्य छैन । विकृतिमा कहाँ–कहाँ छ ? भन्ने प्रश्नभन्दा पनि विृकति कहाँ–कहाँ छैन ? भनेर जवाफ दिनुपर्ने बेला भएको छ ।
हाम्रा नैतिक आचरण मुल्य, मान्यता, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज सबै कुराहरु विकृतितर्फ धकेलिदै छन् । देखेको र सुनेको कुरा पनि आफैलाई पत्याउन गाह्रो छ र साह्रो हुनेगरी विकृतितर्फ उन्मुख छन् ।
हामीले हिजो देखेका, सुनेका, भोगेका जति पनि कुरा छन् ती सबै आज विकृतिमय बनिसके भने आजका नयाँ कुरा जन्मजातमै विकृतिको रुपमा देखापर्न थाली सके । विकृतिको यो प्रकोप मानवले कति रहन, खप्न, व्यहोर्न र धारण गर्न सक्ने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
आज प्रकृतिको न्याय अर्थात् प्रकृतिको समानको न्याय पाउन निकै कठीन र गाह्रो भइसक्यो । हामी अन्यायका कुरा गर्दा र न्यायमाथि सबैको पहुँचका कुरा गर्दा सर्वप्रथम यही विकृतिको जालोलाई तोड्नु, भत्काउनु, च्याथ्नु, उधार्नु, नष्ट गर्नु र भ्रष्ट गर्नु हुनेछ । यदि यसो गर्न सकिएन भने प्राकृतिक न्यायलाई कृत्रिम अन्यायले ध्वस्त पार्नेछ ।
मानिस–मानिसकै गुण, आचरण र विशेषतामा नदेखिनुको प्रमुख कारण नै विकृतिको असमान प्रवाह हो । यो विकृति पनि समान छैन । यसले अनुहार चिनेको छ । रुप चिनेको छ । सोर्स चिनेको छ । फोर्स चिनेको छ ।
पद र प्रतिष्ठा चिनेको छ । सम्मान र सम्पन्नता चिनेको छ । उच्च र निच चिनेको छ । विज्ञ र अनविज्ञ चिनेको छ । सुकिलो–मुकिलो चिनेको छ । होचो र अग्लो चिनेको छ । दुब्लो र पातलो चिनेको छ । कालो र गोरो चिनेको छ । रोगी र निरोगी चिनेको छ । बलियो । निर्धो चिनेको छ ।
यसरी मानिसको शिरदेखि पाउँसम्म र जन्मदेखि मृत्युसम्मको पृष्ठभूमि हरेर विकृतिले आफ्नो अन्याय प्रवाह गर्ने गरेको छ । सबैलाई समानरुपले विकृति आएको भए र विकृति छाएको भए सायद यो समयमै नियन्त्रणमा आउने थियो र यो विकृतिमय बन्नेक्रम पनि भंग हुने थियो । विकृति हुनेका लागि चैन र नहुनेका लागि ऐन बन्दा पनि यसले हाम्रो परिवार, समाजदेखि लिएर सिंगो देशसम्ममा व्याप्त हुँदैछ । विकृति किन आयो ? कसरी आयो ?
कसले ल्यायो ? किन ल्यायो ? यो आफैमा बहस र छलफलको विषय बनिरहला । तर पनि यो विकृति कसै गरेपनि रोकिने र छेकिनेवाला छैन । आज देश कहाँ पुग्ने कहाँ छ ? तथापि यो विकृतिकै कारण हो ।
कसैले भन्न र जान्न सक्दैनन् । किनभने यो सबैमा व्याप्त छैन । असमान ढंग र शैलीसँग प्रवाह भएको कारण यो सबैले देख्न, सुन्न र भोग्न सक्दैनन् ? कसैका लागि यही विकृति फलामको चिउरा बनेको छ त कसैका लागि यही विकृति सुनकै दही, चिउरा बनेको छ । सुनकै दही, चिउरा हुनेले यसलाई विकृति किन भन्ला र ?
उसले त यो निकै विकासे संस्कृति नै भन्ने हो र प्रमाणित गर्ने हो । जसका लागि फलामे दही, चिउरा बनेको छ उसले आफ्ना यथार्थ देखाउने, सुनाउने र बोलाउने हिम्मत नै गर्दैन ।
यदि हिम्मत गरिहाले भनेपनि यसलाई संस्कृति मान्न र ठान्नेको समूह र स्वरले छोपीसकेको हुन्छ । ओति सकेको हुन्छ र तोपिसकेको हुन्छ । कसे मज्जासँग विकृति फैलियो ? सकैलाई थाहै पत्त भएन । आफ्नै गति र चालले आफ्नै गन्तव्य र स्थानमा पाइला चालिरहदासम्म पनि विकृतिले छोएरै छाड्यो ।
राजनीतिक आचरण बोकेका र बटुलेका बाहेक सबैका लागि यो विकृति बन्ला भने राजनीतिक चरित्र र गुण धारण कर्मकाण्डहरुलाई यो संस्कृति पनि बन्ला । आखिर विकृति के हो ? संस्कृति के हो ?
कसैलाई थाहा छैन ? सबैलाई स्पष्ट जानकारी र थाहा छ नि ? यदि हुँदाहुँदै पनि त्यही विकृति सकैका लागि विकृति नै बन्ने । त्यहीँ विकृति कसैका लागि संस्कृति बन्ने । प्रकृतिको न्याय समान यसको पहुँच र विचार विस्तार किन भएन ?
विकृति कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्दा विकृति कहाँ छैन ? यत्र–तत्र सर्वत्र छ भनेर जवाफ दिने तर विकृति कसलाई छ भन्दा बोल्नै नसक्ने ? बोले पनि समान्य र साधारण मात्र बोलने । असामान्य र असाधारण जति सबै मौन बस्ने । यस्तो पनि हुनसक्छ ।
हाम्रो देशको विकृति अरु देशको तुलनामा निकै भिन्न, फरक र पृथक छ । हामीभन्दा परका विकासशील र प्रगतिशील देशहरुमा विकृति सबैका लागि समान छ र त्यहाँ कसैले देखेको, सुनेको र भोगेको विकृति सबैका लागि विकृति हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता देशहरुमा यो विकृति झाङ्गीन, फुल्न, फल्न र फक्रिन नै पाउँदैन ।
हाम्रो देशको विकृति अरु देशको तुलनामा निकै भिन्न, फरक र पृथक छ । हामीभन्दा परका विकासशील र प्रगतिशील देशहरुमा विकृति सबैका लागि समान छ र त्यहाँ कसैले देखेको, सुनेको र भोगेको विकृति सबैका लागि विकृति हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता देशहरुमा यो विकृति झाङ्गीन, फुल्न, फल्न र फक्रिन नै पाउँदैन । तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि विकृति भनेको लक्षित वर्ग, समूह र संगठनका लागि मात्र बन्दछ । अर्थात् हाम्रो देश नेपालमा विकृतिको पहुँच र विस्तार समान गति र चालले सबै व्यक्ति, शक्ति, समूह, संगठन र मोर्चालाई छुन सकेको छैन ।
तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि विकृति भनेको लक्षित वर्ग, समूह र संगठनका लागि मात्र बन्दछ । अर्थात् हाम्रो देश नेपालमा विकृतिको पहुँच र विस्तार समान गति र चालले सबै व्यक्ति, शक्ति, समूह, संगठन र मोर्चालाई छुन सकेको छैन ।
सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा त के हो भने यो विकृति हो है भनेर कसैले स्पष्टरुपमा लेख्दा, देख्दा, सुन्दा, सुनाउँदासमेत त्यो छलफल, बहस, नियन्त्रण र बन्धनको विषय बन्दैन । आजभोलि यसको जालो, उसको जालो, त्यसको जालो भन्ने गर्छन् ।
जे को जालो भएपनि त्यो विकृतिको जालो हो भन्ने कसैलाई पनि लाग्दैन । जबसम्म हामीमा यो प्रकृति अनुरुपको न्याय सम्पादन हुन सक्दैन । देशमा व्याप्त विकृति सबैका लागि समान विकृति हुन सक्दैन तबसम्म हामीमा कुनै पनि आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धि हुँदैन । आज देशका जिम्मेवार व्यक्ति र शक्तिले आगामी दिनहरुमा यो गर्छु, त्यो गर्छु,
यता गर्छु, त्यता गर्छु आदि जे–जे भनेता पनि यो विकृतिको जालोलाई तोड्छु भन्ने महान् पुरुष कोही पनि जन्मिएको छैन र जन्मिएको भएपनि यो निकालेर फ्याँक्ने दिशातर्फ कोही पनि उन्मुख भएकै छैन । जसलाई जे गर्न र जसलाई जे भन्न मन लागे पनि त्यो मनको लड्डु घ्यूसँग खाएको कुरा मात्र हो ।
साँच्चिकै व्यवहारामा उत्रिने हिम्मत कसैको पनि देखिएन । आज यो देशको अग्रगति हुँदा पनि सबैको अग्रगति हुने हो । यो देशको दूरगति हुँदा पनि सबैको दूरगति नै हुने हो । तर पनि किन साझा सवालमा हामी क्रियाशील छैनौ ?
यो विकृतिले कसैका लागि क्षणिक आदतका रुपमा केही समयका लागि लाभ पु¥याए पनि अन्तत्वगत्वा हानी हुने कुरामा त दुईमत छैन नि ? तैपनि किन यो विषय साझा र सरोकारवालाको बन्दैन । जबसम्म नेपालमा फैलिएको व्याप्त विकृति सबैको साझा र सरोकारको बन्दैन तबसम्म हामी पनि सुखी र समृद्धि बन्दैनौं ?
यदि हाम्रो सुखी, सम्पन्नता र समृद्धिको बाधक नै यो अहिलेको असमान विकृति हो भने किन यसलाई निर्मूल नपार्ने ? किन यसलाई अन्त्य नगर्ने ? किन यसलाई निरुत्साहित नगर्ने ? किन यसलाई नष्ट नगर्ने ? किन यसलाई भ्रष्ट नगर्ने ?
किन यसलाई मिल्काएर नफ्याँक्ने ? यो कुरामा सबैको समान ध्यान जानेकि नजाने ? सफल हुने मन कसलाई छैन र होला ? लोकप्रिय हुने मन कसलाई छैन र होला ? जनप्रेमी बन्ने मन कसलाई छैन र होला ? देशप्रिय बन्ने मन कसलाई छैन र होला ? युग साधक बन्ने कसलाई मन छैन र होला ?
तर पनि यी सबैका लागि त केही न केही योगदान गर्न त निश्चय नै जरुरी छ नि ? आज यो देश र यो देशका जनता के का कारणले पछि पर्दैछन् ? भन्ने कारण र कार्य पहिल्याएर त्यसको अन्त्य गर्न सकियो भने सफलता त उसैको होला नि ? चाहनाले, कामनाले सुगन्धले र बासनाले मात्र आफ्नो इच्छा पूरा हुने त हैन होला ?
त्यसका लागि केही गरेर देखाउन अवश्य जरुरी छ होला ? त्यसैले पनि आजको पछिल्लो समयको हाम्रो कमजोरी भनेपनि, रोग भनेपनि, भोक भनेपनि, शोक भनेपनि, गल्ती भनेपनि, कर्म भनेपनि, धर्म भनेपनि, पाप भनेपनि सर्वथोक विकृति नै हो ।
विकृति हाम्रो कर्ममा छ र विकृति हाम्रो सोच र चिन्तनमा पनि छ । त्यस्तै विकृति हाम्रो व्यवहारमा पनि छ । जबसम्म यो अचम्म र अनौठो किसिमको विकृति जरैदेखि नासिन्न र मासिन्न तबसम्म हामी पनि आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्ने लक्ष्य नराखे पनि हुन्छ ।
एउटै समान प्रकृतिमा चल्ने, समान न्याय र असमान न्याय एकैनासले कदापि चल्न सक्दैनन र अघि बढ्न सक्दैनन् । यदि यो सिंगो ब्रह्माण्डको समान नियमलाई तोडेर कोही कसैले कृत्रिम रुपी अन्यायको बारेमा हिड्न चाहन्छ र हिड्ने प्रयास गर्दछ भने पक्कै पनि त्यो आज र भोलिका लागि सकारात्मक र प्रिय बन्ने छैन ।
सबैले जानेको, मानेको र ठानेको कुरा के हो भने विकृतिलाई सङ्लो पारेर संस्कृति बनाउने हो । तर संस्कृतिलाई धमिलो पारेर विकृति कदापि बनाउने होइन । अतः यो हाम्रो आजको सङ्लो संस्कृति धमिलो र विकृतिमय भएकोमा सबैको समान ध्यान, चासो, गुनासो जावस् भन्दै यसको अन्त्य चाहन्छौं ।